Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန် ကမ္ဘာ့စီးပွားဖိုရမ် Davos Agenda သို့ တက်ရောက်မည်
ရှီကျင့်ဖိန် တရုတ်, ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဒါဗို့စ်မြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် နှစ်ပတ်လည် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး၌ အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) Politics, Law & Military
ပေကျင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်သည် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်မည့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် (WEF) Davos Agenda သို့ ပေကျင်းမြို့မှနေ၍ တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
သမ္မတ ရှီသည် WEF တည်ထောင်သူနှင့် အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ Klaus Schwab ၏ ဖိတ်ကြားချက်ဖြင့် အစည်းအဝေး တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကာ အထူးမိန့်ခွန်းလည်းပြောကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဟွာချွမ်းရင်က ကြေညာခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, Jan. 19 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping will attend the Davos Agenda of the World Economic Forum (WEF) on Jan. 25 in Beijing via video link,aForeign Ministry spokesperson said Tuesday.
Spokesperson Hua Chunying announced that Xi will attend the meeting and deliveraspecial speech at the invitation of Klaus Schwab, who is founder and executive chairman of the WEF. ■